आलुको बीउको मूल्यमा एकरुपता नहुँदा किसान मर्कामा - नेपालबहस
| १४:१२:३९ मा प्रकाशित
२९ असोज, टीकापुर । आलु रोप्ने समयमा बजारमा बीउको मूल्यमा एकरुपता नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन् । स्थानीय बजारमा पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्यका कारण किसान मर्कामा परेका हुन् । आलु बीउको मूल्य अत्यन्त महँगो भएपछि यहाँका स्थानीय बजारमा पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्य भएका कारण किसान कुन पसलबाट बीउ किन्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
भारतीय सीमावर्ती बजारबाट आलुको बीउको आयातमा रोक लगाएपछि कैलालीको स्थानीय बजारमा यसको मूल्यमा अत्यन्त वृद्धि भएको किसानको गुनासो छ । कैलालीका बजारमा अहिले उन्नत आलुको बीउ प्रतिकिलो ९० देखि एक सय पाँच रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेका छन् । रातो र सेतो आलुको बीउ प्रतिकिलो रु ७५ देखि ९० मा बिक्री भइरहेको छ । गतवर्ष यही समयमा आलुको बीउ प्रतिकिलो रु ३० देखि ५० सम्म रहेको थियो ।
गत वर्ष पाँच विघा क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दै आएका टीकापुर–१ बनगाँउका किसान बलिराम चौधरी यो वर्ष दुई बिघा क्षेत्रफलमा मात्र आलु खेती गर्ने तयारीमा छन । विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष आलुको बीउ महँगो हुँदा उनले आलु खेतीको क्षेत्रफल नै घटाएको बताए। ‘‘नेपालमा आलुको बीउको अभाव छ । यहाँको बीउले किसानको माग पूरा गर्न सक्दैन’’, उनले भने, ‘‘प्रतिकिलो सय रुपैयाँमा बीउ किनेर खेती गर्नुको कुनै फाइदा छैन् । पछि आलु उत्पादन राम्रो नभए ठूलो लगानी खेर जान्छ । त्यसैले आलु खेतीका लागि केही जमीन घटाएर त्यसमा अन्य तरकारी लगाउने योजना छ ।’’
कैलालीमा कुटपिट गरी युवकको हत्या, तीन जना पक्राउ १६ घण्टा पहिले
अब पनि सग्लो नेकपा रहला र ? १२ घण्टा पहिले
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमित संख्याकाे पाँच हजार नाघ्यो १३ घण्टा पहिले
चाँडै कोरोना भाइरसलाई जित्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीकाे विश्वास ४ दिन पहिले
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन लालपुर्जा दिइने ४ दिन पहिले
आणविक अस्त्रको खर्च शान्ति र मानवताको हितका खातिर उपयोग गरौँ ४ हप्ता पहिले
बन्दाबन्दीमा फरार सूचीका ४८ जना अभियुक्त पक्राउ २ हप्ता पहिले
डा.केसीले तोडे २८ औँ दिनमा १९ औँ अनसन ! ३ हप्ता पहिले
अपहरण गरेर ५० हजार फिरौती माग्ने पक्राउ २ महिना पहिले
कोरोना भाइरसबाट पाकिस्तानमा एकै दिन १०० को मृत्यु ५ महिना पहिले
राप्रपाले तीन दिनसम्म पृथ्वीजयन्ती मनाउने १० महिना पहिले